Karana voatifitra teny Analamahitsy : Valifaty sa asan-jiolahy? | NewsMada
Karana voatifitra teny Analamahitsy : Valifaty sa asan-jiolahy?
Hatramin’ny ora farany nanoratana, omaly, mbola tsy fantatra ny toe-pahasalaman’ilay karana lahy notifirin’ny jiolahy roalahy nitondra môtô, teny Analamahitsy, omaly. Fantatra fa efa voatana teny amin’ny fonjan’i Tsiafahy noho izy voarohirohy tamina raharaha ”kidnapping karana”, trafikana volamena, sy heloka hafa mifandraika amin’izany ity karana ity.
Nirefodrefotra ny basy teny Analamahitsy, avy amin’ny lalana avy any Ambatobe, omaly maraina tokony ho tamin’ny 7 ora sy 40 minitra teo. Karana iray antsoina hoe Radjan Ameralli Moustapha no voatifitry ny jiolahy tao anaty fiarany Audi miloko volondavenona teny an-toerana tamin’izany. Voalazan’ny olona fa naheno poa-basy dimy nirefotra izy ireo, raha niteny ny polisy fa bala telo ny nahavoa ny tarehiny ary nahitana vodina bala roa koa teny an-toerana. Rovitra mihitsy ny tarehin’ilay Karana io ary potika ny vavany.
“Niditra tamin’ny takolany ilany ny bala ary nivoaka tany amin’ny ilany. Tsy maty fa miatrika fandindiana ilay Karana”, hoy ny polisy mandray an-tanana ny raharaha. Araka ny fanazavana ihany, roa lahy izy ireo nandeha moto Cross miloko mainty, nanao blouson mainty, ary ny iray, nanao aroloha miloko volom-boasary, ny iray aroloha mainty. “Nifanena avy any Analamahitsy ireo roa lahy ireo ka raha vao nifanitsy teo amin’ilay Audi, nanao tifitra variraraka avy hatrany. Niezaka ny nitsoaka ilay fiara ka nandona taxi-be ary nifatratra tamin’ny Citroen teo alohany”, hoy ny fitantaran’ny olona iray nitondra fiara nandeha tao aoriana, nahita maso ny zava-nitranga.
“Règlement de compte”?
Fantatra fa efa voarohirohy tamin’ny raharaha fakana an-keriny, fanaovana baomba artizanaly, famotsiam-bola, famonoan’olona hatramin’ny trafikana volamena teto amintsika ity Karana ity antsoina hoe Moustapha ity. Efa notanana am-ponja teny Tsiafahy. Efa tany Tsiafahy izy io ny 27 may 2013 ary voatana valo volana tany, saingy tafavoaka taorian’izay. Efa misy taratasin’adiny maro eny amin’ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana.
Niseho tao anatin’ny fotoana fohy izany rehetra izany. Nitsoaka nihazo an’Ambatobe iny ilay moto nitondra ireo roa lahy. “Tsy fantatra ny tanjon’ireo jiolahy na hamono mihitsy na saika handroba. Tsy nisy na inona na inona lasany tamin’ity tranga ity fa mety “règlement de compte” izy ity”, hoy ny fanazavana azo. Tonga teny an-toerana ny polisy ary naiditra hopitaly ilay Karana, izay voalaza fa mbola tsy maty hatramin’ny ora nanoratanay. Nandeha kosa ny fanarahan-dia saingy niala maina ny polisy.
Tao anatin’ny volana vitsivitsy izay, lasibatry ny jiolahy ny Karana. Tranga efatra ny mitovitovy amin’izao niseho hatramin’ny fiandohan’ny taona no ho mankaty. Vao ny faran’ny herinandro teo, nisy saika haka an-keriny teny Ambatobe ny Karana iray. Izao indray ity tranga omaly teny Analamahitsy ity.
Vao tsy ela koa ny nitifiran’ny jiolahy nandeha moto ilay teratany vahiny kaonsilan’i Malezia taloha tao anaty fiarany teny Tsaralalàna. Asan-jiolahy sa famonoan’olona tsotra izao ireny? Ny vokatry ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana mbola tsy nisy tatitra mazava momba ireo tranga mahazo ny vahiny na ny karana ireo.
Mihorohoro ny olona, mampiaka-peo ny fikambanan’ny karana mizaka zom-pirenena frantsay eto amintsika. Miandry izay tohin’ny fanadihadian’ny polisy indray amin’ity indray mitoraka ity.